Akhriso :- Xaalado Qarsoon Oo Jira Oo Uu Xilka Uu Ka Weyi Karo Amiir Maxamed Bin Salman |
Akhriso :- Xaalado Qarsoon Oo Jira Oo Uu Xilka Uu Ka Weyi Karo Amiir Maxamed Bin Salman
Riyaad (GNN):- Dhimashadii Wariyaha Reer Sacuudi Jamaal Kashoqji ee ka dhex dhacay qunsuliyadda Istanbul iyo dareenkii Xigay ee diidmada Siyaada Caalamiga ayaa horseeday in maalgashadayaashii Sacuudiga inay dhaqaalahooda u xawishaan meel ka baxsan Sacuudiga, ayna joojiyaan maalgalintii gudaha, sida Shabakada Bloomberg ay shaacisay.
“Maalgashadayaasha Reer Sacuudi ayaa sida muuqata lumiyay aaminaadooda inta Maxamed Bin Salmaan laga difaacayo geeridii Kashoqji, gaar ahaan intii lagu gudo jiray howlgalkii ka dhanka ahaa dadka taajiriinta iyo ololihii ka dhanka ahaa Musuq maasuqa”ayaa lagu yidhi warbixinta Bloomberg.
Marka la wareystay inka 10 ruux oo kala duwan ayaa waxaa la sheegay in dadka maalgashan jiray Sacuudiga ay dhaqaalahooda u xawisheen meel ka baxsan Sacuudiga, waxaana lagu guul dareystay in la ogaada marka xawaaladaha ay dhigayeen.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in Maxamed Bin Salmaan uu ka badbaaday dilka wariyaha, laakiin dadka gudaha Sacuudiga ayaa lumiyay kalsoonidii lagu maalgashan lahaa, sidoo kale wuxuu u horseeday burburka dib habeynta lagu waday dalkaasi.
Waxyaabaha kale ee uu burburiyay waxaa kamid ah hay’addo ka qeyb qaata dhaqaalaha dalkaasi kuwaasi oo kor u qaadi lahaa dakhliga Sacuudiga ee kaliya Shidaalka ku tiirsan.
“Lacagta wey kasoo baxday gudaha Sacuudiga xitaa inta aan la xirin Ritz” Sidaa waxaa yiri Stephen Hertog oo ah qabiir ku taqasusay arimaha Khaliijka, waxna ka dhiga iskuulka dhaqaalaha ee London, “Tani waa sababta hoos u dhigtay dhaqaalaha oo waxay mas’uuliyiinta ay ku talaabsanayaan tallaabooyin miisaaniyadeed oo looga jawaabayo qiimaha saliida hooseeya.”
Haddii xaaladdan sii socota waxaa Sacuudiga qasab ku noqon doonta in Maxamed Bin salmaan meesha laga sarao si loo bad-baadiyo dhaqaalaha dalka.